के राहुल गान्धी आफुसँगै नेपाल आएकी युवती फ्लोरर डोमिनिक जेभियरसँग सम्बन्धमा हुन्? - Pardafas
के राहुल गान्धी आफुसँगै नेपाल आएकी युवती फ्लोरर डोमिनिक जेभियरसँग सम्बन्धमा हुन्?
सुम्निमा उदासकाे विवाहमा राहुल र जेभियर । जेभियरले नेपालमा प्रयाेग गरेकाे पासपाेर्टकाे तस्वीर र उनकाे सन् २०१२ काे तस्वीर ।
भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेशका शीर्ष नेता तथा गान्धी परिवारका सदस्य राहुल गान्धी सोमबार नेपाल आएर बिहीवार दिल्ली फर्किए ।
उनी आफ्ना पुराना मित्र सुम्निमा उदासको विवाह समारोहमा सहभागी हुन आएका थिए । र, उनले सुम्निमाको विवाह समारोहमा सक्रिय सहभागिता जनाए ।
राहुल नेपालमा रहँदा उता दिल्लीमा मात्रै होइन भारतवर्षमै उनको चर्चा र आलोचना भयो । सोमबार मध्यरातसम्म राहुल आफ्ना साथीहरुसँग ठमेलको एक चर्चित क्लबमा पुगे । जहाँ उनलाई एउटी युवतीसँग देखियो । सो भिडियोमा रहेकी युवती नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत भएको भन्दै भारतमा चर्चा भयो ।
तर त्यो सत्य थिएन । ती युवतीलाई भारतीय संचारमाध्यमले नै नेपाली गायिका सरस्वती खत्री भएको दाबी गरेका छन् । खत्री सुरसुधासँग आवद्ध गायिका हुन् । उनले समेत राहुलसँगको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकी छन् । उनको अनुहार र क्लबमा राहुलसँगै देखिएकी युवतीको अनुहार केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ । तर ती युवती खत्री नै भएको पुष्टि भएको छैन् ।
राहुल नेपालमा रहँदा नेपाली कांग्रेशका नेताद्धय उदय शम्सेर जबरा र राजिवविक्रम शाहले भेटघाट गरेको उच्च सुरक्षा स्रोतले पुष्टि गरेको छ । यसबाहेक उनको राजनीति भेटघाट खुलेको छैन । नेताद्धय राणा र शाहले समेत पुरानो सम्बन्धका कारण राहुलसँग भेटघाट गरेका थिए ।
राहुल दिल्लीबाट सोमबार भिस्तारा एयरको विमानमा आएका थिए । उनीसँगै एकजना पुरुष र महिला थिइन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नक्सालस्थित होटल मेरियट पुगेका उनीहरु सोमबार राती र मंगलबार दिनभर त्यही बसेका थिए । सोमबार राती राहुल होटलबाट उनीसँगै आएका पुरुषसँगै क्लब गएका थिए । युवती होटलमै थिइन् ।
मंगलबार साँझ राहुल र ती युवती सुम्निामाको हिन्दु परम्परा अनुसार भएको विवाहमा सहभागी हुन् मानभवन गए । राहुलसँगै रहेकी युवती विवाह समारोहमा उनीसँगै गफिदैं गरेकी थिइन् । तर उनको र राहुलको हाउभाउले दुबै सार्वजनिक रुपमा अघि आउन चाहिरहेका थिएनन् ।
मंगलबार साँझ राहुल ती युवती र अन्य साथीहरुसँग ललितपुर लाकुरी भञ्ज्याङस्थित एक रिसोर्ट पुगेका थिए । सुम्निामाको द टेरेसेस रिसोर्टमा शेर्पा परम्परा अनुसार विवाह भएको थियो । यहाँ समेत राहुलसँगै आएकी ती युवती थिइन् ।
यी हुन् ती युवती
सुम्निामाको विवाह समारोहका सबै कार्यक्रम काठमाडौं वेडिङ नामक इभेन्ट कम्पनीले व्यवस्थापन गरेको थियो । यो कम्पनीले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा सार्वजनिक गरेको भिडियोमा राहुलसँगै देखिएकी युवती र पर्दाफास डटकमलाई अति गोप्य स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उनी सन् १९९० को दशककी चर्चित मोडल फ्लोरर डोमिनिक जेभियर हुन् ।
उनी सन् २०१२ सम्म सक्रिय मोडल थिइन् । भारतीय नागरिक भएपनि उनले नेपालमा रहँदा पोर्चुगलको पासपोर्ट प्रयोग गरेकी थिइन । भारतीय होटल ‘टाइकुन’ गोविन्द अकोईसँग सम्बन्धपछि मोडलिङ छाडेर इन्टरियर डिजाइनर बनेकी फ्लोरर डोमिनिक जेभियरलाई भारतमा फ्लोरर जेभियर नामले चिनिन्छ ।
उनी र अर्की चर्चित मोडल नेत्रा रघुरमनले सन् २०१६ सम्म सुपर मोडल कम्पनी प्राली र लिटिल रेड टोट सञ्चालन गरेका थिए । यही कम्पनीले भारतका चर्चित र सर्वाधिक खोजीमा रहेका निरभ मोदीको ब्यापार प्रवर्द्धनमा सघाएको थियो । हिरा ब्यापारी मोदीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा खोलेको हिरा शोरुमको उद्घाटनमा यी दुबैले मोडललाई र्याम्पमा हिँडाएका थिए ।
फ्लोरर जेभियरले सन् १९९६ मा जापानको कानाजावा, इशिकावामा भएको मिस इन्टरनेशनलको ३६ औं संस्करणमा भारतको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन् । यस्तै उनी मिस ब्युटीफुल स्किन र फेमिना मिस इण्डियामा समेत सहभागी थिइन् ।
तर, सन् २०१६ यता फ्लोरर जेभियर चुपचाप थिइन् । हालैमात्र उनलाई राहुल गान्धीसँग नेपालमा देखिएको हो ।
यी महिलाले लुकाइन् १० वर्षसम्म आमाको शवलाई फ्रिजमा
हनुमन्ते जग्गा एकीकरणमा नगरपालिका र प्राधिकरणबीच ‘टसल’, दुई अर्बको आयोजना अन्योलमा
गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको विरोधमा दायर रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशको बेञ्चमा
उच्च अदालत इलामकी कर्मचारी महिलाको हत्या आरोपमा प्रहरीका असई पक्राउ